Dagaallo ka dhacay Gobollada Dhexe
Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay, 9 kalena way ku dhaawacmeen dagaal maanta Al-Shabab iyo Ahlu-Sunna ku dhexmaray Deegaanka Dhagaxyaale.
In kabadan 5 qof ayaa ku dhintay, 9 kalena way ku dhaawacmeen dagaal saaka aroortii maleeshiyo ka kala tirsan Alshabaab iyo Kuwa Ahlu-Sunna Wal-jamaaca ku dhexmaray degaanka Dhagaxyaale oo u dhaxeysa Guriceel iyo Wabxo.
Sida ay VOA-da u xaqiijiyeen ilo degaanka ku sugan, dagaalkan ayaa bilowday kaddib markii ay maleeshiyada Shabaabku ay weerar ku qaadeen degaanka Dhagaxyaale oo ay ku sugnayeen Maleeshiyo Reer Guuraa ah oo gacan saar la leh Ahlu Sunna.
Guddoomiye ku Xigeenka degmada Guriceel Cali Baashi Aden Diiriye ayaa sida uu sheegay isagoo ku sugan degaanka Dhagaxyaale waxaa uu tilmaamay in xaaladdu ay imika dagantahay, degaanadii lagu dagaalamayna ay haatan gacanta ugu jirto kooxda Ahlu Sunna.
Dhowrkii cisho ee ugu dambeyay Maleeshiyada taabacasan Ahlu Sunna ayaa weerarro ku dhufo oo ka dhaqaaq waxaa ay ku hayeen Fadhiisimaha Alshabaab ee degaanno hoostaga Tuulada Waro-dhuumale.